ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): ကျွန်မနှင့်ပန်းဥယျာဉ်မြို့တော်မှနေ့ရက်များ
မလင်းလက်ရေ... မရောက်တာကြာလို့ လာလည်တယ်ဗျာ။ ဒီမှာ နာမည်တူတယောက်တွေ့တယ်... ကျွန်တော်တော့ မဟုတ်ဘူးဗျ. ကျွန်တော်ရေးရင် ပရိုဖိုင်းလ်ပါ ပြလေ့ရှိတယ်နော်. အဆင်ပြေပါစေဗျာ.
Keep it up Sis. :)